हनुमानको विशेष कृपा रहने ४ राशी कुन कुन ? – Rapti Khabar
हनुमानलाई हिन्दु धर्ममा चाडैँ प्रसन्न हुने देवताका रुपमा उपासना गरिन्छ । सच्चा मनले उपासना गर्नेहरुको हनुमानजीले मनोकामना पुर्ण गर्ने धार्मिक मान्यता छ ।
सम्पुर्ण राशीमध्ये मेष राशीमा हनुमानजीको विशेष कृपा रहने गर्दछ । यस राशीका जातकलाई कुनै पनि समस्या वा बाधा आइलागे हनुमानजीले तुरुन्त त्यसको निवारण गर्दछन् । यस राशीका जातकले हनुमानको उपासना गरेमा बुद्धि, कौशल र चर्तुराईं, धन प्राप्त गर्दछन् ।
२. सिंह राशी
यस राशीका जातकमा समेत हनुमानजीको विशेष कृपा रहने गर्दछ । सिंह राशीका जातकमा आउने हरेक संकटबाट हनुमानजीले रक्षा गर्दछन् । यस राशीका उपासकलाई हनुमानजीले ठूला दुर्घटना वा संकटबाट बचाउने गर्दछन् । हनुमानजीको कृपाले यस राशीका जातकलाई धन लाभ हुने वा जागिर र व्यवसायबाट सफलता पाउने गर्दछन् ।
३. वृश्चिक राशी
वृश्चिक राशीका जातकमा हनुमानजीको विशेष कृपा रहन्छ । कुनै पनि कार्यको अड्चन निवारणमा वृश्चिक राशीका ब्यक्तिले हनुमानजी रक्षा कवचका रुपमा रहने गर्दछन् । यस राशीका हनुमान उपासकले धनसम्पती र प्रतिष्ठा प्राप्ती गर्दछन् ।
४. कुम्भ राशी
मेष राशी पश्चात कुम्भ राशीका जातकमा भगवान हनुमानको विशेष कृपा रहने गर्दछ । यस राशीका ब्यक्तिले व्यावसायिक र व्यक्तिगत सफलता वा उपलब्धि हात पार्न हनुमानको उपासना गरेमा शिघ्र फल प्राप्त हुन्छ । यस राशीका हनुमान उपासकले वादविवाद तथा कानुनी मामलामा समेत वियज प्राप्त गर्दछन् ।
पूजा पाठ गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो गल्ती फिटिक्कै नगर्नुहोस्
के तपाईं पूजा–पाठ गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने झुक्किएर पनि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् । हामीले कयौँ पटक पूजापाठ गछौँ, तर त्यसको फल मिल्दैन् ।
हिन्दु शास्त्रमा हामीलाई पुजा गर्दा के गल्ति गर्न हुँदैन्, के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने बारे उल्लेख गरिएको छ ।
निम्न कुरामा ध्यान दिनुहोला
– यदि तपाईंले गलत कामबाट पैसा कमाउनु भएको छ भने त्यो रकम भगवानलाई नचढाउनुहोस्। यसलाई अपराध मानिने गरिन्छ ।
– पुजा–पाठ गर्ने समयमा कहिले पनि नीलो वा कालो रंगको कपडा लगाउनु हुँदैन् ।
– अँध्यारोमा भगवानको मूर्ति वा तस्वीरलाई स्पर्श गर्नु वा पुजा गर्नु अपराध मानिने गरिन्छ ।
– शवको स्पर्श गरेपछि या मलामी गएपछि स्नान नगरी पुजा गर्नु हुँदैन् ।
– रिसाएको बेला भगवानको उपासना गर्दा फल मिल्दैन् ।
– घण्टी वा शंख आदीको आवाज नदिइ पूजा गर्दा गभवानले स्वीकार गर्दैनन् ।
– संभोग गरीसकेपछि स्नान नगरी पुजा गर्नु हुँदैन् । यसलाई अपराध मानिने गरिन्छ ।
हामीमध्ये धेरैको इन्टरनेट ब्याण्डविथ कम हुने तथा स्पीड स्लो हुने समस्या आफ्नै कारणले घरभित्रबाट भइरहेको हुन्छ । धेरै डिभाइसहरु अनलाइन हुँदा यसले घरको वाईफाई नेटवर्कमा भार बढाउँछ । जसले गर्दा हाम्रो कनेक्सन टुटिरहन्छ । यदि तपाईंले पनि यस्तो समस्या सामना गरिरहनु भएको छ भने तपाईंले आफ्नो घरको सम्पूर्ण वायरलेस नेटवर्कमा २५/३० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गरेर […]
काठमाडौं- आम नेपालीले भान्छामै प्रयोग गर्ने विभिन्न खाले मसलाहरूले कोरोनासँग लड्ने अचुक औषधिका रूपमा काम गर्न सक्ने डा. रामआधार यादवले बताएका छन्। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. यादवले हामीले भान्छामा प्रयोग गर्दै आएका सुठो, मरिच, पिप्ला, दालचिनी, अलैंची, असुरो, जेठी मधु, पुदिना, तुलसी, गुर्जोलगायतको नियमित सेवनले शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता […]
शुक्रबार थपिए अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमित